गिरिजा, प्रचण्ड र देउवाविरुद्ध यी हुन् अदालतमा परेका मानहानिका चर्चित मुद्दा ? प्रश्न र उत्तर
पुस २६, काठमाडाैं ।
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा अदालतको आदेश मान्य हुँदैन भनेर दिएको अभिव्यक्तिले अदालतको मानहानि भएको भन्दै तत्कालीन कांग्रेस सभापति तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । त्यस्तै माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल हत्या अभियोगमा दोषी ठहर भएपछि पक्राउ गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश नमानेको आरोपमा नेपाल प्रहरीका आइजिपी प्रकाश अर्यालविरुद्ध परेको अवहेलनाको मुद्दा विचाराधीन छ ।
फैसलाको आलोचना हो, अदालतको होइन’
अदालतको अवहेलना गरेको अभियोगमा सोमबार राति पक्राउ गरेर मंगलबार बिहान सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराइएका डा. गोविन्द केसीले न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेसमक्ष दिएको बयान अाजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।
यस अदालतबाट भएको आदेशमा निजी मेडिकल कलेजले प्रश्रय पाउने, गुणस्तरहीन स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन हुने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृति विसंगति आई तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्य र जिउधनप्रति खेलबाड भइरहेकाले त्यस्तो आदेश गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध लड्नु मेरो कर्तव्य हो । मेरो भनाइ गलत निर्णय दिने न्यायाधीशविरुद्ध हो । न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गर्दा जनतालाई न्यायको अनुभूति दिन सक्ने, न्याय सम्पादन र न्याय प्रशासनको नेतृत्व निष्पक्ष ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने, आदर्शवादी अनुकरणीय व्यक्ति हुनुपर्नेमा नागरिकतासम्बन्धी विवाद, उमेरसम्बन्धी विवाद, शैक्षिकसम्बन्धी विवाद, चूडामणि शर्मासम्बन्धी राजस्व छली, आयल निगम, एनसेल, भूमाफिया र नातावादसम्बन्धीलगायत क्रियाकलापले न्यायपालिकाको आस्था, गरिमा र स्वाधीनतालाई चुनौती दिएका कारण उनीबाट अदालतको अपहेलना भएकाले निजमाथि अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्ने हो । ममाथि लगाएको आरोप झुटा हो । मैले अदालतको अवहेलना गरेको छैन । सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई न्यायिक छानबिनको दायरामा ल्याई कारबाही गरे न्यायालयको गरिमा वृद्धि हुन्छ । अदालत जनताको आस्थाको केन्द्र बन्छ ।
अदालतमा ८ घन्टा
सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा सोमबार राति पक्राउ परेका डा. गोविन्द केसीलाई प्रहरीले मंगलबार बिहान ९ बजे नै अदालत पुर्‍याएको थियो । सर्वोच्चका रजिस्ट्रारको उपस्थितिमा हाजिरीमा हस्ताक्षर गरेपछि केसी एम्बुलेन्सभित्रै बसे । उनी अनशनमै रहेकाले दुई चिकित्सक पनि औषधिसहित सँगै थिए । उनीहरूले केसीको ब्लडप्रेसर जाँच गरिरहेका थिए । केसी अदालतभित्र प्रवेश गरेपछि बाहिर समर्थक र शुभचिन्तकको भिड लागेको थियो । सुरक्षाकर्मीको पनि बाक्लो उपस्थिति थियो ।
१०ः३० मा अदालतको इजलास खुल्यो । तर, ११ बजेसम्म केसी आराम गरेर बसिरहे । ११ बजे इजलास नम्बर २ मा न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसे उपस्थित भए । केसी अस्वस्थ भएकाले आधा घन्टासम्म इजलास अघि बढ्न सकेन । साढे ११ बजे न्यायाधीशसमक्ष बयानका लागि उनी तयार भए । करिब डेढ घन्टापछि १ बजे ‘टिफिन ब्रेक’मा डा. केसी आराम गरेर बसे । २ बजेबाट पुनः इजलास सुरु भयो । ४ बजेसम्म बयान लिएपछि इजलास बन्द भयो । केसीलाई इजलासबाट निकालेर ४ः१५ बजे प्रहरी एम्बुलेन्समा राखियो । त्यहीँ उनको प्रेसर चेकजाँच गरियो । ५ः१५ बजेसम्म एम्बुलेन्समै राखियो । त्यसपछि केसीलाई लिएर प्रहरीको एम्बुलेन्स वीर अस्पताल पुग्यो ।
हिरासतमा १२ घन्टा
त्रिवि शिक्षण अस्पतालपरिसरबाट सोमबार साँझ ८ बजे पक्राउ गरेर डा. गोविन्द केसीलाई सीधै सिंहदरबारस्थित महानगरीय प्रहरी वृत्तमा लगिएको थियो । नेपाल प्रहरी अस्पतालको एम्बुलेन्समा प्रहरीका चिकित्सक टोली पनि साथैमा थिए । केसीलाई वृत्तको कार्यालय भवनको माथिल्लो कोठामा राखियो, जहाँ व्यवस्थित सुत्ने खाट, ओढ्ने, ओछ्याउने व्यवस्था छ । विगतमा पक्राउ परेका सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीका प्रमुखहरूलाई पनि त्यही कोठामा राखिएको थियो ।
रातभर कसैसँग बोलेनन् केसी
एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार केसीले प्रहरीसँग केही कुरा गरेनन् । प्रहरीको चिकित्सक टोली केसीको स्वास्थ्य निगरानीका लागि रातभरि वृत्तमै थियो । केसी अनशनमै थिए । प्रहरी अधिकारीले खानपिनबारे सोधे, तर केसीले खान मानेनन् । प्रहरीले पनि कर गरेनन् । ‘हामीले उहाँलाई सोध्यौँ, तर अनशनमै छु भनेपछि कर गर्ने कुरा भएन । उहाँ भोकै सुत्नुभयो,’ एक प्रहरीले भने ।
केसीको मुटुको धड्कन कम
प्रहरी चिकित्सक टोलीका अनुसार सोमबार राति केसीको मुटुको धड्कन कम भएको थियो । प्रहरी हिरासतमा उनी आरामसँग सुते । मंगलबार बिहानै प्रहरी चिकित्सक टोलीले केसीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्‍यो । केसीको खाना पकाइदिने सहयोगी बिहानै पुगेका थिए । त्यसपछि केसीको अनशनका समर्थकद्वय डा. अभिषेक सिंह र डा. जीवन खत्रीले केसीलाई भेटे । उनीहरू आधा घन्टा बसेर फर्केपछि नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई वृत्त पुगेर केसीसँग कुराकानी गरे । भट्टराई धेरै बेर बसेनन् । त्यसपछि अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितको टोलीले केसीलाई भेट्यो । बिहान पौने ९ बजे केसीलाई सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो ।
अदालतमा परेका मानहानिका चर्चित मुद्दा
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा अदालतको आदेश मान्य हुँदैन भनेर दिएको अभिव्यक्तिले अदालतको मानहानि भएको भन्दै तत्कालीन कांग्रेस सभापति तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध परेको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लाउडा विमान खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा बयान दिन बोलाउँदा अस्वीकार गरेर अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दा खेपेका थिए । उनी अदालतलाई नारायणहिटी दरबारमा सार्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विवादित भएका
थिए । तर, त्यो मुद्दा त्यत्तिकै सेलायो ।
मुद्दाको बहस बुधबार
डा. केसीको बयान सकिएको छैन, बहस पनि सुरु भएको छैन । उनलाई बुधबार बिहान १० बजे अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिँदै स्वास्थ्य उपचारका लागि वीर अस्पताल पठाइएको छ । केसीले मंगलबार सवा आठ बजे अदालतमा उपस्थित भएर करिब चार घन्टा बयान दिएका थिए । बयान र बहसपछि अदालतको अवहेलना गरेको ठहर भएमा उनीमाथि कैद, जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।